Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Ubaba". Indaba yethu ye-Sokratis Papastathopoulos Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama ezindabeni ezidumile, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungubani Umbhoshongo wokuzivikela wamaGreki. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abacabangela iSokratis Papa's Biography okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts-Isiqalo sokuphila
USokratis Papastathopoulos, owaziwa yigama elilodwa linguSokratis wazalwa ngosuku luka 9th kuJuni 1988 kunina (igama elingaziwa), nobaba, uCharalambos Papastathopoulos eKalamata, eGrisi. USokratis wakhulela eKalamata, okuyinto edolobheni elibili elinabantu abaningi eSouth Greece.
"Njengengane, kwakungekho amathoyizi noma imidlalo, nje ibhola." Uke wathi.
Ekuqaleni, kwakuyi-Sokratis iqhaza ngebhola eyamenza ahluke kwezinye izinqumo eziphansi. Njengoba ekhulile edolobheni lapho kungekho lutho oluphela khona lapho kunezinyawo ezinyaweni zomuntu, kwakulula kumaSokratis abasha ukuthi abambe isifiso sakhe sokuba umqeqeshi wezemidlalo
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Uthando lukaSokratis lwebhola lwambona wabhala ohlwini lweqembu lesikhamuzi sendawo, I-Aiantas Kalamatas owamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe. Emuva ngaleso sikhathi, wayengumfana othobekile futhi ohoxisiwe ongakwazi ukuphatha ibhola ngaphezu kweqembu lakhe. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba izifiso zakhe zikhule. I-Sokratis ngenhloso yokuthuthukiswa kwakufanele iqinisekise ukuthuthela kwelinye iqembu leqembu lesiGreki elisha okuthiwa u-Apollon Petalidiou.
Ukubeka igama lakhe lokuqala ngeShirts: Ngaleso sikhathi, uSokratis wenza isinqumo sokuba negama lakhe 'Sokratis'ngemuva kwehembe lakhe ngenxa yesibongo sakhe sangempela'Papastathopoulos'okude kakhulu ukulingana. Ngesidlaliso, wathola igama elithi 'Ubaba'.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Njengengxenye encane, wonke uSokratis adingekayo kwakuyi-push enkulu nokuzikhandla emsebenzini. Emuva ngaleso sikhathi, kwakungeyona yonke impi yokuqeda umsebenzi wakhe osemusha ngeqembu eliphakeme lesiGreki. Lesi sifiso ekugcineni sabona ukukhanya okwesibhakabhaka njengoba uSokratis athola umsizi we-scout football efanekiselwa ngezansi ogama lakhe linguToni Savevski.
U-Toni ubebhekene nokusiza uSokratis ukuba ajoyine i-AEK Athens ngemuva kwecala eliphumelelayo neqembu ngenyanga ka-Okthoba 2005.
USokratis wafuna indlela yokubuyisela emuva ngokuthembisa ukuthi angamdumazi umsizi wakhe. Ugcwalise isithembiso sakhe ekuqaleni kwakhe ku-AEK ngokufaka amagoli ngomzuzu wesikhombisa womdlalo.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- I-Greek 2004 Triumph
Uthi bewazi? ... U-Sokratis wayengomunye wabadlali bebhola lezinyawo ezinenhlanhla okwaba yindwangu yokuthenga ama-scouts kulo lonke elaseYurophu. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba izwe lakhe laseGrisi lidle i-2004 European Championship eyabanjelwa iPortugal.
Ngisho nawe u-revolution yebhola yamaGreki ufike masinyane kuSokratis, waqhubeka ezuza ngemuva kokuthatha iminyaka engu-4 yase-Italy ngemuva kokudlala noGenoa. Nakuba wayengu-18 kuphela ngaleso sikhathi, uSokratis walisebenzisa kakhulu amathuba akhe okuzibonakalisa njengesikhungo sokuqala sokukhetha. Lokhu kwaholela ekuthengeni kwakhe yi-AC Milan.
Ngemuva kokudlala imifino ye-5 noMilan, uSokratis wayebolekele eJalimane ngemuva kokungakwazi ukuncintisana noNesta, uZambrotta Thiago Silva. Wabona impilo engcono eJalimane futhi wanquma ukufuna ukudluliselwa ku-Werder Bremen kuze kube yilapho esebenza ngokumangalisayo ngemali mboleko.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukulwa nokuphakama kweJalimane
Ngomhla ka-16th ka-Ephreli 2012, kwaziswa ukuthi uSokratis uzojoyina iBrmen ngokugcwele. Isizini se-2012-13, noma kunjalo, asiyena omuhle weqembu. Umzamo owodwa we-Sokratis akwanele ukuqinisa ithimba lakhe kude nempi yokulwa.
Ngo-Mashi 2013, phakathi kwempi yokulwa nokuhlukunyezwa okukhulu, uSokratis wazibandakanya emgqeni wokuqeqesha owakhonza naye UMarko Arnautović. Buka ividiyo ye-outburst ngezansi.
UBurussia Dortmund wathola ithuba lokuthukuthela phakathi kwalaba ababili futhi wanquma ukulandela ummangalelwa. Ngo-24 May 2013, ukuphela kwe-2013 Champions League Final phakathi kweBayern Munich neBorussia Dortmund, uSokratis wagcwalisa imali engu-9.5 million ukudluliselwa eDortmund. Lapho esayina, wakhuluma nge-deal, ethi,
"Imali ayizange ibe nengxenye esinqumweni sami sokujoyina i-Dortmund. Ikusasa lami kwakuyilokho okubalulekile futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngenze isinqumo esifanele. "
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Uthi bewazi?... Izinto ezimbili zaletha ukuphakama kukaSokratis. Okokuqala kwakuyiNdebe Yezwe le-2014 eBrazil. Siyabonga wakhe ukusebenza okuphawulekayo kulo mqhudelwano, uSokratis ekugcineni wazibhalela ezincwadini zomlando weqembu lakhe likazwelonke phakathi nomncintiswano.
Lesi yisikhathi lapho umbhoshongo wesiGreki waholela ithimba lakhe ukubhuka-indawo endaweni ye-Round of 16 okokuqala emlandweni wabo.
I-Dortmund Impact: Esinye isizathu sokuthi udumo lwakhe luyiqembu lakhe lokudlala indebe yeqembu lakhe laseJalimane. USokratis unyaka wokuqala noDortmund wavuzwa ngokukhethwa kwakhe ku-XI engcono kakhulu I-2013-14 Bundesliga umkhankaso. Kwakungeyona nje incazelo yezokuvikela kukaDortmund eyayiwela kuye, kodwa futhi nokuhlasela njengoba kuboniswe kule vidiyo ngezansi.
Ngemva SikaJürgen Klopp ukuhamba, uSokratis usalokhu engumholi ongamangalelwa ku-BVB defense kuze kube yi-2 July 2018 lapho eba inhliziyo Unai Emery's ukuvikela.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ngasemuva wonke umuntu ophumelelayo, kukhona owesifazane. Kumdlali webhola lezinyawo, kukhona inqola ekhangayo ebonakalayo kumuntu we-Xanthippi Stamoulaki.
Bobabili uSokratis noStamoulaki banendodakazi egama layo linguChara Papastathopoulou.
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso okuphila komuntu siqu
U-Sokratis ungumuntu onamahloni futhi ophansi kakhulu emhlabeni. Akayena phakathi kwalabo bebhola abadumile abadumile ngokusebenzisa amaholo abo abavulekile ukuze badlale amathoyizi.
Uthi bewazi?…Ngemva nje kokusayina i-Dortmund, uSokratis wamangaza wonke umuntu ngokuvukela ekuqeqeshweni ku-Fiat 500 encane, imoto iphinde iqhutshwa Ngolo Kante.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Sokratis Papastathopoulos Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.